भारतले नेपाललाई नटेर्नुको कारण के हो ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीति → भारतले नेपाललाई नटेर्नुको कारण के हो ?
भारतले नेपाललाई नटेर्नुको कारण के हो ?
October 19, 2015३५० पटक
काठमाडौं,कात्तिक २ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले झण्डै एक महिनादेखि अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको भारतले नाकाबन्दी खोल्न अटेर गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । भारतले नटेरेका कारण तत्काल सहज वातावरण बनाउन सम्भावना नरहेको एमालेले विश्लेषण गरेको छ । तर, उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत गइसकेकाले उनी फर्किउञ्जेल पर्खेर हेर्ने एमालेले नीति लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आइतबार एमाले स्थायी समितिको बैठकमा मन्त्रीहरुको छनोटबारे नभई भारतीय नाकाबन्दीका विषयमा छलफल भएको थियो ।
नाकाबन्दीका कारण नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको भन्दै बैठकमा सहभागी एमाले स्थायी कमिटीका नेताहरुले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न दबाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले परराष्ट्रमन्त्री थापा दिल्ली पुगेको र त्यहाँ हुने राजनीतिक भेटको कुनै सन्देश नआएसम्म पर्खनु उपयुक्त हुने बताएको एमाले एक नेताले जानकारी दिए ।
एमालेका एक पदाधिकारीले अनलाइनखरसँग भने( ‘परराष्ट्रमन्त्री एउटा मिसन लिएर भारत गइसक्नुभएकाले के सन्देश आउँछ, हेरौं भन्ने टुंगो भएको छ ।’
उनका अनुसार मन्त्री थापाले लिएर आउने सन्देशका आधारमा सरकारले उपयुक्त निर्णय लिनेछ । थापा आजै काठमाडौं र्फकंंदैछन् ।
मन्त्री थापाले दिल्लीमा के गरे ?
शनिबार दिल्ली गएका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आइतबार गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेटघाटको समय नदिए पनि परराष्ट्र मन्त्री थापाले दुई वरिष्ठ मन्त्रीलाई भेटेर सीमानाकामा आवागमन सहज बनाउन आग्रहसमेत गरेका छन् । तर, भारतले आफ्नो तर्फबाट अवरोध नभएको भन्दै आफ्नो देशभित्रको समस्या आफैं सुल्झाउन सुझाव दिएको छ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै भारतले नाकाबन्दीलाई खुकुलो बनाउने अपेक्षासहित परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली भ्रमणमा गए पनि दिल्लीले नेपालको समस्या समाधान गर्नु भन्ने पुरानै सन्देश सुनाएर तत्काल नाकाबन्दी नहट्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ ।
भारतले नयाँ सरकारलाई आफ्नो स्वार्थहरु पूरा गराउने र गलाउने रणनीति लिएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।अनलाइन खबर मा छ ।